Daawadan Ayey Jabaaneesku Siiyaan Bukaanada Covid-19 | Xaqiiqonews
Daawadan Ayey Jabaaneesku Siiyaan Bukaanada Covid-19
Dowladda Jabaan ayaa daaha ka qaatay in ay bukaanadooda qaba karoona fayrus kula tacaalaan oo ay siiyaan daawada lidka fayruska ee Remdesivir
Daawadani oo ay sameyso shirkadda Ameerikaanka ee Gilead Sciences ayaa noqoneysa daawada lambarka koowaad ee Jabaaneesku u isticmaalaan covid-19, waxa ayna ka horeysaa daawada jabaan lagu sameeyo ee lidka fayruska Favipiravir.
xoghayaha golaha wasiirada Japan Yoshideh Sog ayaa wariyaasha u sheegay in japan ay ka qeyb ka tahay dadaalada caalamiga ee dawo loogu raadinaayo fayruskan.
Remdesivir oo ah daawo ah lidka fayruska, ayaa loo isticmaalay in lagu daweeyo epola, waxaa kale oo daawadani loo adeegsaday daweeynta fayruskii Karoonaha camal ahaa ee Sars, hase ahaate khubarada ayaa ku doodaya in daawadani ay wali saarantahay “miiska tijaabado” , si loo ogaado hadii ay wax ka tari karto daweynta covid-19.
Jabaaneeska oo hadda isticmaala daawooyinka Remdesivir iyo Favipiravor ee lidka Fayruska, ayaa sheegaya in daawooyinkani ay keeneen natiijooyin wanaagsan markii loo adeegsaday bukaanada cudurka ku cusbaa.
Soga waxa uu yiri “waxa aan bixineynaa dadaalkeena ugu badan, si loo helo daawo macquul, waqtiga ugu dhaw”.